Stock နဲ့ Limited Company ဆိုတာဘာလဲ? | Mycanvas
Stock နဲ့ Limited Company ဆိုတာဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဟာအရင်းရှင်အုပ်ချုပ်မှုကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစနစ်ကိုနားလည်ထားရပါမယ်။ အားကစားကစားနည်းတွေအတွက်ထားရှိတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားဖို့လိုသလိုပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံအကျဆုံးစည်းမျဉ်းတွေကိုသိရမှာလည်း သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ခြင်းမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Stock နဲ့ Limited Company အကြောင်းရှင်းပြထားပါတယ်။
In capitalism, we all place most importance on the stock price ofacompany.
Stock ဆိုတာဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Stock တစ်ခုမှာ စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကို ၎င်းမှထုတ်ပေးတဲ့ Stock စုစုပေါင်းရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်အရ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စတော့စျေးနှုန်းကိုအရေးအပါဆုံးအဖြစ်ထားကြရပါတယ်။
(ဥပမာ)- Company A
စတော့ဈေး : 2.00 USD
Company A ၏စ‌တော့ဈေး : 2.00 [USD]20,000 [stocks]40,000 [USD]
မောင်မောင်၌ Company A ၏ စတော့ရှယ်ယာအားလုံး၏ ၄၀% ရှိသည်။
မောင်မောင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု: 40,000 [USD] × 40 [%] = 16,000 [USD]
[Limited Company ဆိုတာ]
Limited Company ဆိုတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ Popular အဖြစ်ဆုံးကုမ္ပဏီအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီအမျိုးအစားဟာ ၎င်းရဲ့ စတော့ရှယ်ယာများလဲလှယ်မှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှအရင်းအနှီးရရှိပါတယ်။ ၎င်းဟာ အမြတ်အစွန်းများရရှိပြီး ရရှိတဲ့အမြတ်အစွန်းတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံပြန်ပေးပို့ရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည် အမြတ်ရရှိမှုနဲ့ ရရှိလာသောအမြတ်တွေနဲ့ ၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအဓိကထားလေ့ရှိပါတယ်။ အမြတ်အစွန်းပိုရလေ ၎င်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတော့ရှယ်ယာနှုန်းတိုးမြင့်လာလေဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိလာလေဖြစ်ပါတယ်။
(ဥပမာ) Company A, မောင်မောင်၌ Company A ရဲ့ စတော့ရှယ်ယာ 40% ရှိတယ်။
Fiscal Year တွင် Comany A သည် စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ 100,000 USD ရရှိခဲ့သည်။
-> မောင်မောင်သည်စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေရဲ့ 40% ကိုရရှိမည်။
100000 [USD]40[%]40,000 [USD]
*အမြတ်ငွေ = ရောင်းအား – ကုန်ကျစရိတ် (အလုပ်သမားစရိတ်အပါအဝင်)
[Stockholders များရဲ့ အင်အား]
အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အထွေထွေစတော့ရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးရဲ့အစီအစဉ်များကိုဆုံးဖြတ်ပေးပြီး အစုရှယ်ယာရှင်များအားလုံးပါ၀င်ရပါမယ်။ Board Director အဖွဲ့သည် များသောအားဖြင့် ကုမ္ပဏီရဲ့မဟာဗျူဟာ၊ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အထွေထွေစတော့ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအစည်းအဝေးတွင် ဒါရိုက်တာများကိုရွေးပြီး အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသောသူဟာ ကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာဖြစ်လာပါမယ်။ အချို့လူများက ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်၎င်း၏အလုပ်ရှင်(သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုထင်မြင်ကြပါတယ်။ သို့သော်စတော့ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များဟာ ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး ဒါရိုက်တာများ(သို့မဟုတ်) ၀န်ထမ်းများနှင့်အတူ အမြတ်အစွန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကြွေးကြောင့်ဒေဝါလီခံရလျှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ရှယ်ယာရှင်များမည်သို့ဖြစ်သွားမလဲ? သူတို့ပြန်ဆပ်ဖို့လိုပါသလား ??
တကယ်တော့, Stockholders တွေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့က သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီအစားပြန်ဆပ်ရန်မလိုပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်အထိသာ တာ၀န်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီး ထပ်မံပေးဆောင်စရာမလိုပါဘူး။
Stock Definition (investopedia.com)
Ltd. (Limited) Definition (investopedia.com)